कंगनाले चलचित्र निर्माण गर्ने ‘बाहुवली’का लेखकले चलचित्र लेख्दै - Shuva Bihani
कंगनाले चलचित्र निर्माण गर्ने ‘बाहुवली’का लेखकले चलचित्र लेख्दै
२०७६ मंसिर १०, मंगलवार ०८:३५ November 26, 2019 Shuva Bihani Team0
नायिका कंगना रनावत अब चलचित्र निर्माण गर्दैछिन् । उनले, केही समय अगाडि नै आफू निर्माता बन्न लागेको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनै, कंगनाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राम मन्दिर विवादको बिषयमा चलचित्र बनाउने भएकी छिन् ।
उनले ‘अपराजित अयोध्या’ नाममा चलचित्र निर्माण गर्दैछिन्, जसको लागि उनले भारतको टप स्टूडियोसँग कुराकानी पनि अगाडि बढाइसकेकी छिन् ।
कंगनाले भारतीय मिडियासँग भनेकी छिन्–‘राम सन्दिर सयौ बर्षदेखिको ज्वलन्त बिषय हो । ८० को दशकमा जन्मिएकाले पनि मैले यो बिषयको बारेमा सुन्दै आएको छु । किनकी, जुन भूमीमा यस्ता राजाको जन्म भयो, जो बलिदानको प्रतिक थिए । उनको बिषय नै विवादित बन्न पुग्यो ।’
यो चलचित्रलाई ‘बाहुवली’का लेखक के।वी। विजयेन्द्र प्रसादले लेख्नेछन् । कंगना राम भक्तहरुको अटुट विश्वासका लागि यो चलचित्र एक प्रकारले श्रद्धाञ्जली पनि हुने दाबी गर्छिन् ।
अमेरिकन म्यूजिक अवार्डमा सेलेनाको हट अवतार
के भयो प्रधानमन्त्रीलाई ? एक्कासी अस्पताल भर्ना भए
२०७६ मंसिर १०, मंगलवार ०७:४२ November 26, 2019 Shuva Bihani Team
किन रुचाइएन ‘चच हुई’ ?
२०७६ मंसिर १०, मंगलवार १८:०४ November 26, 2019 Shuva Bihani Team